Ukubhalisa kwi-intanethi - iSikole soLwimi lwaseKhaya, iCambridge
Nceda ugcwalise okanye uhlole yonke indawo efunekayo!
Ukuba ungathanda ukubhalisa esikolweni nceda:
Gcwalisa ifom engezantsi kwaye isicelo sakho siya kuthunyelwa esikolweni.
Ukuhlawula idiphozithi (i-1 iveki yekhosi kunye neendleko zokuhlala kunye nentlawulo yokubhuka yokuhlala xa kusebenza) kwaye siza kubhala ikhosi yakho kwaye silungiselele indawo yokuhlala.
Siya kuqinisekisa ikhosi yakho kunye neendawo zokuhlala xa sifumana idiphozithi yakho kwaye sikuthumelele incwadi ye-Acceptance. Abafundi abangengabo base-EU baya kufuna le nto ukuze bafumane i-visa yokungena yase-UK.
Iimimandla ezimakwe nge (*) ziyafuneka.
Nceda usitshele igama lakho!
Nceda usitshele igama lakho okanye igama lentsapho!
Le ndawo iyafuneka.
I dolophu / I sixeko:*
Le ndawo iyafuneka
Umbuso / Ummandla / iPhondo:
Nceda khethaAfghanistani Aland IslandsAlibhaniyaAljeriyaAmerican SamoaAndorraAngolaAngwilaAntarcticaAntiguwa neBarbuda ArgentinaArmeniya ArubhaOstreliyaOstriya AzerbayijaniBhahamasBhareyiniBhangladeshiBarbadosBhelarusiBheljiyamBelizeBeninBhermudaBhutanBolivia, State Plurinational yeEBonaire, Sint Eustatius kunye SabaBhozniya neHerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBhulgariyaBurkina FasoBurundiKhambodiyaKhameruniKhanadaKheyip VerdeCayman IslandsIriphabliki yaseAfrika eseMbindiniTshadChileiTshayinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsKholambiyaKhomorosKhongoICongo, iDemocratic Republic of theIsiqithi saseKhukicosta RicaKhot divwaKhroweyishiyaTyhubhaCuraçaoSayiprasi Umphakathi waseCzechDominikhaJibhutiDominikhailizwe lasedominicEkhuwadoEgyptEl Salvado Ekhwithoriyal GiniEritreaEstoniyaYuthophiyaFalkland Islands (Malvinas)Faroe IslandsFijiFinlendFransi French GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiyaGeorgiaJemani GhanaGilbhralthaGrisiGrinlendGrenadaGuadeloupeGuamGuatemaleGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHoly See (Vatican City State)HondurasHong KongHangariAyisilendIndiya IndoneshiyaIran, amaSilamsi Republic ofIrakhAyalendIsle of ManSirayeli ElamaTaliyaneJameyikhaJaphanJerseyJordanKazakhstanKhenyaKiribatiKorea, Democratic Peoples Republic ofKorea, kwiRiphablikiKhuweyithiKhirgizstanLao People ye-Democratic RepublicLathviyaLibhanonLesothoLayibheriyaLibyan Arab hiriyaLikhtensteyinLithuwaniyaLaksembhegMacaoMakedoni, IYaphabliki yaseYugoslavia yangaphambiliMadagaskaMalawiMaleyishiyaMaldivsmaliMaltaIsiqithi saseMashalMartiniqueMorithaniyaMorishiyasiMayotteMekhsikhoMicronesia, misebenzi ಮೆಟಾಡೇಟಾMoldova, kwiRiphablikiMonakhoMongoliyaMontenegroMontseratMorokhoMozambikhMyanmarNamibhiyaNauruNephalelamaDatshi New CaledoniaNyu ZilendNikharaguwaNayijaNayijeriyaNiueIsiqithi saseNofolkhIsiqithi saseMariyana eseMantlaNoroweOmanPhakistanPalauTerritory namaPalestina, UxakekilePanamaGini eNtsha yasePapuwaParaguayPeruFilipayinziPitcairnPholendPhotshugoiPuerto RicoKhwathaReunionRomaniyaIRussian FederationRwandaSaint BarthelemySaint Helena, i-Ascension kunye noTristan Da CunhaSeyint Kitsi neNevisSeyint LushiyaSaint Martin (Icandelo laseFransi)Saint Pierre and MiquelonSeyint Vinsent neGrenadinsSamoaSan MarinoSawo Tome nePrinsipeISaudi ArabiaSenegalserbiaSeytshelsSierra LeoneSingapho Sint Maarten (iNxalenye yeDatshi)SlovakiyaSloveniyaIsiqithi saseSolomonSomaliyaMzantsi AfrikaI-Georgia ne-South Sandwich IslandsSouth SudanSpeyinesri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwaziniSwidenSwizalendWeRiphabliki yaseSyriaTaiwan, kwiPhondo ChinaTajikistanTanzania, United weRiphablikiThayilendi East TimorTogoTokelawuTongaThrinidadi neThubhagoThunishiyaikarikuniTurkmenistaniTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaYukreyiniIUnited Arab Emiratesiunited Kingdomeunited StatesUnited States Islands Minor Outlying IslandsUruguayUzbhekistanVanuatuVenezuela, Bolivarian Republic ofViyethnamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USWallis FutunaWestern SaharaYemenZambiyaZimbabwe Le ndawo iyafuneka.
Nceda faka idilesi yakho ye-imeyile epheleleyo, umzekelo, igama@example.com. Inombolo yakho yefowuni kunye ne-imeyile idilesi ayayikwabelwana ngazo nawaphi na amaqela athathu. Ulwazi lwakho lukhuselwe nguMgaqo-nkqubo Wobumfihlo.
Ngqina idilesi yakho yemeyile:*
Le ndawo iyafuneka. Nceda ukhangele ukuba iyafana nentsimi ngasentla.
Igama loqhagamshelwano olukhawulezayo:*
Nceda unikeze igama lomntu esinokuqhagamshelana naye kwimeko engxamisekileyo. Oku kungaba ilungu losapho okanye umhlobo.
Ifowuni yoqhagamshelwano olukhawulezayo:*
Nceda unikeze umnxeba wenombolo yocingo loxinzelelo.
Usuku01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 / Inyanga010203040506070809101112 / Unyaka1900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050 Igalelo elingasebenziyo
ULwimi lo kuqala:*
Nceda usitshele indlela owaqala ukuva ngayo ngathi*
Apha ufanele usitshele ngohlobo lwenkqubela ofuna ukuyenza, kangakanani na nini na.
Nceda ukhethe uhlobo lwenkxaso yakho:*
IsiNgesi ngokuBanzi- iiyure ezili-15 zokufundaIsiNgesi esinzulu -Iiyure ezingama-21 zokufundaIkhosi yasemva kwemini- iiyure ezi-6 zokufundaIkhosi yangokuhlwa ye-IELTS-6 yeeyure zokufundaAbaqalayo Ikhosi yasekuseni-yokufunda iiyure ezingama-4.5 Igalelo elingasebenziyo
Nceda ukhethe yiphi ikhosi ongathanda ukuyijoyina.
Ungathanda ukuqala nini? Ngokuqhelekileyo lo nguMvulo*
Usuku01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 / Inyanga010203040506070809101112 / Unyaka20192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050 Igalelo elingasebenziyo
Ungathanda ukugqiba nini? Ngokuqhelekileyo lo nguLwesihlanu*
Zingaphi iiveki onokuthanda ukufunda?*
Zingaphi iminyaka ufunde isiNgesi:
Ziziphi iimvavanyo zesiNgesi ozidlulileyo?
Ziziphi iinjongo zakho zekhosi?
Umzekelo: Uvavanyo ongathanda ukuthatha (PET, FEC, CAE, CPE, IELTS?) Okanye ukuXhumana ngokubanzi.
Sinika indawo yokuhlala yokuhlala okanye unokuzilungiselela ukuba uhlale e-UK.
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga nemikhosi yethu kunye neendidi zokuhlala nceda uvakashele iphepha lokuhlalisa abantu.
Unokufika kwindawo yokuhlala yakho ngoMgqibelo okanye ngeCawa ngaphambi kokuba ikhosi yakho iqale.
Nceda ukhethe indawo yokuhlala*
Ukhwele ukuya phakathiIbhdi nesidlo sakusasaUkuzityisaIndawo yokuhlala / iYMCA (iYunivesithi)Indawo yokuhlala Igalelo elingasebenziyo
Qaphela: Indawo yokuhlala / i-YMCA (ngaphambili Yomfundi waseYunivesithi) yindawo yokulala yokuzimela kwaye ifumaneka kuphela kwizifundo ngoJulayi-Agasti.
Ukuba uhlela indawo yakho yokuhlala sicela usinike idilesi:
Ungathanda nini ukufika kwindawo yokuhlala? Ngokuqhelekileyo le yiCawa
Ungathanda nini ukushiya indawo yakho yokuhlala? Ngokuqhelekileyo lo nguMgqibelo
Nceda uqaphele: Akukho nanye kwindwendwe yamakhaya eyabinceda abantu abasafuni ukutshaya ngaphakathi kwindlu.
Nceda usixelele malunga naluphi na utywala okanye nayiphina imfuno ekhethekileyo yempilo okanye yokutya:
Imirhumo kunye nentlawulo
Ngethuba lesicelo unakho ukuhlawula idiphozithi okanye imali epheleleyo.
Inkokhelo encinane engaphendulwanga yikhosi ye-1 yeeveki yokuhlala + ye-1 yeveki yokuhlala + imali yokubhuka yokuhlala ye-GBP 50.
Ukuba ukhetha ukuhlawula yonke imirhumo yakho ubale ngolu hlobo lulandelayo: x imali yeveki (ngaphantsi nasiphi na isaphulelo) + x indawo yokuhlala yeveki + GBP 50 iifizi zokubhukisha indawo yokuhlala
Unokuhlawula ngeKhadi leKhadi, iBhanki yeTanfayile, Hlola okanye iCash.
Nceda ubone 'Indlela yokuBhalisa'iphepha leenkcukacha zethu zebhanki kunye nendlela yokuhlawula ngekhadi lekhredithi.
Ngaba ukhokhe idiphozithi okanye imali epheleleyo ngoku?*
Nceda faka indlela ohlawula ngayo ngoku:
Hambisa isicelo sakho
Ndiqinisekisa ukuba ndifuna ukufunda kwiSikolo soLwimi oluPhakathi, eCambridge ngemihla enikiweyo. Ndifundile kwaye ndiyayamkela yonke imiqathango kunye neemeko kule Fom nakwincwadana / iwebhusayithi. Ndisempilweni kwaye andinako ukukhubazeka ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni ngaphandle kokuba kucacisiwe kwileta eyahlukileyo okanye kwi-imeyile.
Nceda ukhawuleze uqinisekise ukuba uyavumelana nesitatimenti esingentla*
Ndiyavuma, nceda wamkele ifom yam yobhaliso! Igalelo elingasebenziyo
Ndiqinisekisa ukuba ndifunde INqubomgomo Yobumfihlo ye-CLS.
Nceda uqhagamshelise ukuqinisekisa ukuba ufunde INqubomgomo Yobumfihlo ye-CLS*
Ndiyifunde Inqubomgomo Yobumfihlo ye-CLS Igalelo elingasebenziyo
Nceda ufake into oyibonayo*
Ngokuthatha ixesha lokwenza oku, uqinisekisa ukuba ungumntu wangempela. Enkosi.